I-Studio ngasechibini e-Palmas del Mar - I-Airbnb
I-Studio ngasechibini e-Palmas del Mar
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Nayuan & Ivonnette
U-Nayuan & Ivonnette Ungumbungazi ovelele
I-Shared Pool protocol idinga ukuthi ababambiqhaza bethule ikhadi lokugomela i-COVID-19, ngaphandle kwengane engaphansi kweminyaka engu-12.
I-Beach casual studio efulethini elisendaweni ekhethekile yasePalmas Del Mar. Jabulela impilo ye-Palmas enamachibi angasese ayinkimbinkimbi, ukufinyelela okuqondile ezinkundleni zethenisi, ngaphakathi kwenkundla yegalofu yomphakathi, izindawo zokudlela ezinhlobonhlobo kanye nokuhamba nje imizuzu eyi-15 ukuya esihlabathini esithambile solwandle olushisayo.
Ifulethi le-studio liyigumbi elikhulu elihlukaniselwe indawo enkulu. Inekhishi layo elihlome ngokuphelele kanye negumbi lokugezela eligcwele. Umbhede onedoli, umbhede osofa odoli, kanye netafula elihle eliguqulekayo elihlala 4. Elinokubukwa okuhle kwezintaba.
I-Palmas Del Mar ingumphakathi onamasango onolwandle, izinkundla zegalofu, izinkantolo zethenisi, inkundla yokudlala yezingane nezindawo zokudlela ezinhle.
Ibungazwe ngu-Nayuan & Ivonnette
Umnyango unokhiye ohlakaniphile onekhodi yokungena, kodwa siyatholakala ngemibuzo ngombhalo, ngocingo kusukela ngo-7:00am-9:00pm.
UNayuan & Ivonnette Ungumbungazi ovelele